Hadaad wax ka barato guuldarada, runtii lumo. - Zig Ziglar - xigasho Pedia
Noloshu waxay ina siisaa waayo aragnimo kala duwan. Annagu ma nihin markasta fahan sababta ka dambeeya dhammaan dhacdooyinka. Laakiin iyada oo aan la ogayn, dhammaan waaya-aragnimadani waxay wax ka geystaan ​​qaab uun xagga qaabeynta qofka aannu runtii noqonnay. Khibradaha qaar ayaa naga siiya farxad, qaarna murug bay naga siiyaan.
Intaas oo dhan oo aan ku barbaarno oo nolosheenna ay ku noqoto mid kobcinaysa qaabkooda. Waxaan u dareemi karnaa kaalmo inta lagu jiro xilliyadayada adag, laakiin waa inaan tixgelinnaa inay yihiin weji oo aan sugno waqtiyada wanaagsan ee imaan doona. Cilmaannimadu waxay ina siisaa awood aan ku wajahno waxa aan u malayn lahayn inaan la qiyaasi karin.
Waxaa jira waxyaabo badan oo la baran karo markii qofku wajaho waqtiyo adag ama xitaa uu lumo. Waxay ina baraysaa adkeysiga iyo waxay sidoo kale ina siineysaa sawir cad oo ah waxa aan runtii awoodno. Waxaan fahamsanahay in xanuunka uu yahay mid xad dhaaf ah laakiin waxaan sidoo kale ognahay in doorashada kaliya ay tahay in laga gudbo.
Waqtiyadan adag waxay noo sheegaan asxaabteena dhabta ah. Waxay naga caawineysaa inaan sameysanno xirniimo nolosha ugu dambeysa. Waxaa la sheegaa in asxaabta ku darsaday xaaladaha xun ay si wanaagsan isula fahmayaan maxaa yeelay waxay wada kulmaan duufaano. Markaa, waxaa jira casharo kala duwan oo aan baranno, iyo waxyaabo intaa ka badan marka aan wajaheyno waqtiyo adag ama xitaa guuldarro.
Markaa waligaa ha dareemin inaad runtii luntay markii lagaa adkaaday, waayo waxaad casharradaada ka baratay sida ugu adag ee ay waligeed kuu sii jiri doonto. Waxaad heshay xigmad iyo aqoon, ka adkaato guul darada kaa dhigaysa mid sii xoogeysa intii kaa horaysay.
Xigashooyinka la bartay
Dulucda Quusin Baro
Casharka Baro xigashooyinka Nolosha
Xigashooyinka Dhaqdhaqaaqa Ciyaaraha
Dadku badanaa waxay dhahaan dhiirigelintu ma sii jirayaan Hagaag, sidoo kale maydhashada qubeys - taasi waa sababta aan ugu talineyno maalin kasta. - Zig Ziglar
Dadku badanaa waxay yiraahdaan dhiirigelintu ma sii jiri doonto. Hagaag, sidoo kale maydhashada / qubeys - taas darteed ayaan ugu talineynaa maalin kasta.…